Baarlamanka Puntland oo martigelinaya shirka shanaad ee afhayeennada baarlamanka federaalka iyo dowlad-goboleedyadda – Kalfadhi
Baarlamanka Puntland oo martigelinaya shirka shanaad ee afhayeennada baarlamanka federaalka iyo dowlad-goboleedyadda
Maamulka golaha wakiillada Puntland ayaa shaaciyay in Garowe marti-gelinayso shirka sannaad ee ay yeelanayaan afhayeenadda baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad-goboleedyadda.
Shirka afhayeennada golayaasha baarlamanka heer federaal iyo heer dowlad-goboleed ayaa Garowe ka socon doona muddo afar cisho ah oo ka bilaabanaysa 7 – 11ka Abriil, sida lagu sheegay war ka soo baxay golaha wakiillada Puntland.
Xoghayaha guud ee golaha wakiillada Puntland Cabdirisaaq Xiddig Warsame iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka ayaa ka qaybgalay shir laba maalmood Muqdisho uga socday maamulka golayaashaas. Waxaa la xaqiijiyay in si horudhac ah loo sii diyaariyay ajandaha kulankaas.
Waxaa la ogyahay in shirku yahay mid kulminaya afhayeennada golayaasha baarlaman ee dalka, welise lama oga magacyada masuuliyiinta ku casuman.
Shirkan wuxuu ku soo beegmay xili uu arbacadii furmay fadhiga koowaad ee kalfadhiga shannaad ee baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya oo ay hor yaaliin ajandayaal xasaasi ah iyo iyadoo uu toddobaadkan xirmay kalfadhiga 43aad ee golaha wakiillada Puntland
Golaha Shacabka oo maanta dood adag ka yeelanaya amaanka dalka